गायिका मेनुका पौडेलले खोलिन रमेश प्रसाइको बारेमा अहिले सम्म कसैलाई थाहा नभएको यस्तो राज ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित) – AB Sansar
October 28, 2020 adminLeaveaComment on गायिका मेनुका पौडेलले खोलिन रमेश प्रसाइको बारेमा अहिले सम्म कसैलाई थाहा नभएको यस्तो राज ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
काठमाडौँ, गायिका मेनुका पौडेल नेपाल आइडलमा दर्शकहरुले रुचाएकी प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिय पनि उनि अहिले गित संगीतमा आफ्नो रफ्तार लाइ निरन्तर बढाई राखेकी छन । दर्शकको भोटिंगका आधारमा उनी अगाडिका छनौटमा पर्न असमर्थ भएकाले बाहिरिएको बताईएको थियो । उनि भन्छिन मानिसको जीवनमा जहिले पनि जे पनि आईपर्न सक्छ मान्छेको भाग्य कुनै पनि बेला चम्किन सक्छ । ****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
स्कटनेपालको अनलाइन अन्तरबार्तामा उनले रमेश प्रशाईको निकैनै प्रशंसा गरेकी छन् अहिले सम्म सामाजिक संजाल लगायत कुनै मिडियामा उनले जे भनिन त्यो कुरा सार्बजनिक न भएको जानकारी गराइन।
रमेश प्रसाई स्नातक तहका विद्यार्थी हुन्। उनी धरानको रेडियो गणतन्त्रका कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुन्। उनको आवाज श्रोतामाझ लोकप्रिय छ। रमेश प्रसाई कविता समेत लेख्ने गर्दछन्। कविता तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना विचारहरु राख्दा आफूभित्रको कुण्ठा बाहिर आउने उनी बताउँछन्।
बोल्नमा माहिर उनले रेडियो कार्यक्रमहरु तथा इन्टरनेट र पुस्तकहरू मार्फत देशविदेशका खबरहरु जानकारी लिने बताउँछन्। उनी आफु बोल्न कै लागि जन्मेको बताउछन्। समाजमा केहि घटना घट्दा उनी तत्काल आफ्नो विचार राख्ने गर्छन्। -स्कटनेपालबाट । ****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
खुसिको खबर: नेपालमा आज एकै दिन यति धेरै संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किए !
नेपाली दम्पतीको भारतमा टिपरको ठक्करबाट मृ`त्यु
भगवानको भजन गाउदै पत्नी ब`टुल्दै;गरे चौथो विवहा।
January 15, 2021 January 15, 2021 Ab-संसार